အားလုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်း 2021 ခုနှစ်မှာ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့ Kpop လောကရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီး (9) ခု
Kpop လောကမှာ နှစ်တစ်နှစ်မရောက်ခင် Kpop prediction ဆိုတာမျိုးတွေ fan တွေကလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တချို့အရာတွေက မမှန်ပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုထဲကမှ တကယ့်ကိစ္စကြီးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
SHINee အဖွဲ့ရဲ့ နောက်ဆုံး comeback က 2018 ခုနှစ် September လ ကပါ။ ထိုချိန်ကစပြီး ခုချိန်ထိ SHINee member တွေ စစ်မှုထမ်းနေလိုက်ကြတာ အကြီးဆုံး ၃ယောက်ကတော့ ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် အငယ်ဆုံးလေး Taemin စစ်ထဲမဝင်ခင် album တစ်ခုတော့ ထွက်နိုင်မယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထင်တဲ့ အတိုင်းပါဘဲ member4ယောက်ပါတဲ့ “Don’t Call Me”album ဟာ February 22 မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Jennie က 2018 မှာ solo debut လုပ်ခဲ့တာမို့ နောက်တစ်ယောက် solo debut လုပ်ဖို့ blink တွေက နှစ်တွေအကြာကြီး စောင့်မျှော်ရင်း စောင့်မျှော်လာလိုက်တာ ခုဆို 2021 ခုနှစ် ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ သေချာပေါက် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် နောက်တစ်ယောက် solo comeback လုပ်မယ်လို့ fan တွေက ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကံကောင်းတာက တစ်ယောက်တောင်မဟုတ်ဘဲ နှစ်ယောက်လောက် YG က ဆက်တိုက် solo debut လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Rosé ရဲ့ album “R “ က March လ 12 ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး Lisa ရဲ့ LALISA album က September 10 ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
LOONA အဖွဲ့ရဲ့ vocal queen “Haseul” ဟာ သူမရဲ့ mental health အတွက် 2020 ခုနှစ် January လမှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့က သူမ မရှိဘဲ လအတော်ကြာ run ခဲ့ရတာမို့ fan တွေက သူမ လုံးဝ ထွက်သွားမှာ စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တော်သေးတာက သူမဟာ ဒီနှစ် June လ မှာ ပြန်လာခဲ့ပြီး “PTT (Paint The Town)” album မှာ ပြန်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
Mingi ကလည်း သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့် 2020 November မှာ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာထွက်တဲ့ ​ပထမ album မှာ ပြန်ပါလာခဲ့ပေမဲ့ ဒုတိယ album ထွက်တဲ့အခါကျ မပါလာခဲ့ပြန်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တတိယ album ထွက်တဲ့ September လမှာတော့ အပြည့်အဝပြန်ကောင်းသွားပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။
Wendy ကတော့ 2019 ခုနှစ် December လ မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ accident အကြီးစားတစ်ခုကြောင့် အချိန်အတော်ကြာ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ သူမဆေးရုံမှာ အကြီးအကျယ် ကုသမှုခံနေရတယ်လို့ကြားတိုင်း ပရိတ်သတ်တွေက ရတတ်မအေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ Wendy ဟာ ဒီနှစ်အစပိုင်းမှာ Solo album “Like Water” နဲ့ ပြန် comeback ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေခန့်မှန်းတဲ့အတိုင်း Augest လမှာ အဖွဲ့ လိုက် album “Queendom” ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
6. An older, lesser-known K-Pop group would haveasudden and huge success
ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ အနုပညာ သက်တမ်းကြာမြင့်နေပေမဲ့ မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့ kpop အဖွဲ့ဟာ 2021 ခုနှစ်မှာ နာမည်အရမ်းကြီးလာမယ်လို့ fan page တစ်ခုက ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဟောကိန်းအတိုင်းပါဘဲ… Brave Girls အဖွဲ့ရဲ့ 2017 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Rollin” သီချင်းက ဒီနှစ်မှာ ပြန်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်လည်းဆို နှစ်ကုန်ဆုပေးပွဲတွေမှာပါ ဆုတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြန် Comeback ဖို့ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နောက် Group တစ်ခုကတော့ EXO အဖွဲ့ပါ။ သူတို့ဟာ 2019 ခုနှစ်ထိ နှစ်တိုင်း Group album ထွက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ 2020 ခုနှစ်မှာတော့ group comeback မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ 2021 ခုနှစ် D.O. နဲ့ Xiumin စစ်မှုထမ်းပြီး ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ “Don’t Fight The Feeling” Group album နဲ့ ပြန် comeback ခဲ့ပါတယ်။
Rookie Group ဖြစ်တဲ့ ENHYPEN အဖွဲ့ဟာ ဒီနှစ်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်မယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်… သူတို့အဖွဲ့ဟာ 4th Gen ထဲမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး album ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး Daesang ဆုဖြစ်တဲ့ “Rookie Artist of the Year” ဆုကိုတောင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး SM Entertainment ကနေ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Aespa အဖွဲ့ဟာ စ debut ထဲက အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ 2021 ခုနှစ်မှာ ပိုအောင်မြင်မယ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေက တွက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို Aespa အဖွဲ့က နှစ်ကုန်ဆုပေးပွဲတွေမှာ “Best Group — Female”, “New Artist of the Year — Female”, “Record of the Year (Daesang)”“Best Dance Performance” “Best New Female Artist” အစရှိတဲ့ ဆုများစွာ သိမ်းပိုက်ပြရင်း သက်သေထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Previous post Ji Hyo နဲ့အတူ “We Got Married” ရိုက်ဖို့ HAHA ရဲ့ အကြံ​ပေးမှုကို Jong Kook တစ်​ယောက် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ
Next post နေမကောင်းနေတဲ့ Yeontan လေးကို ရည်ရွယ်ပြီး နွေးထွေးတဲ့စကားလေးတွေ ပို့သလိုက်တဲ့ V